Lacag kaga hel khadka tooska ah alaabada Google sanadka 2022 - Wareegtada Hantida
Bogga ugu weyn Samee Lacag Khadka Tooska ah ee Alaabada Google sanadka 2022
Way dhammaadeen maalmihii markii google ahaa uun meel lagu maamulo amarradaada raadinta. Hadda, lacag ku sameynta google waa caadadii ugu dambeysay.
Maalin kasta, dadku waxay si xeeladaysan u raadinayaan macneheedu inay lacag ka helaan dadka lacag naga sameeyay. Wax kasta oo nacalad ah oo halkaas ka jira waa la lacag -gelin karaa.
Tusaale ahaan, waad noqon kartaa lagu bixiyo lacag la'aan? Aan macquul ahayn, sax?
Hadda qiyaasi shirkad sida Google ah oo aniga iyo adiga dhab ahaantii gacan ka geysanay koritaankooda!
Maaddaama Google ay awood u yeelatay awooddeeda mashiinka raadinta iyada oo loo marayo Google Adwords, oo ah goob onlayn ah oo u saamaxaysa inay dakhli ku helaan mushahar-gujin advertising, waxaa la joogaa waqtigii aad bilaabi laheyd inaad lacag ka sameyso khadka tooska ah adoo adeegsanaya alaabada google. Yaan lagaa tegin!
Qeybta hoose waxaa ku jira sida loo sameeyo alaabta google.
Miyaad raadineysaa siyaabo aad lacag uga sameysan karto internetka google iyo alaabteeda? Waxaan keennay liis dhammaystiran oo ah 'sidee'.
# 1 Google Adsense ee shabakadaha / Blogs
Waxaad lacag kaga heli kartaa mashiinka raadinta adiga oo ku xira koontadaada Google AdSense.
AdSense waa badeecad google ah oo ku soo bandhigaysa xayeysiiska boggaaga. Sidaas darteed, marka la riixo, Google ayaa ku siinaysa qayb ka mid ah dakhligooda xayeysiiska.
Markay timaado inaad lacag ku sameysato internetka adoo adeegsanaya sheyga google Adsense, waxaad u baahan tahay wanaagsan iyo gaadiid badan.
Waxaad asal ahaan u baahan tahay waxyaabo soo jiidan doona dad cusub maalin kasta goobtaada.
U dir xayeysiiska raadinta gaarka ah ee Adsense. Tani waxay siin doontaa adeegsadayaasha awood ay ku helaan waxyaabo gaar ah oo ku yaal bartaada oo ay sare u qaadaan faa'iidadaada.
#2 Bilow Kanaalka YouTube
Tani waa hab kale oo lacag looga sameeyo internetka adoo adeegsanaya sheyga google.
Ku xir AdSense adiga YouTube kanaalka oo bilow inaad kasbato xayeysiinta lagu dhejiyay kanaalkaaga.
Markaad la aasaasay kanaalkaaga, dhex mari astaamaha oo daar lacagaynta.
Waxaad sidoo kale dooran kartaa fiidiyowyada si aad lacag uga sameyso iyo nooca xayeysiiska ah ee soo bixi doona.
Dadka akhriya nuxurkaan, waxay ku dambeeyaan akhriska Sidee Vloggers -ka Lacag uga Sameeyaan Fiidiyowyadooda | Khabiir …
Podcast-ku waa mid ka mid ah barnaamijyada madadaalada ee ugu dambeeyay. Haddii aad si joogto ah u samayn karto waxyaabo maqal ah oo gaar ah, markaa waxaad ku guulaysan lahayd podcasting.
Asal ahaan, waxaad ku dhajin kartaa boodhadhka boggaga fayl gareynta sida google Podcast. Waxa kale oo aad isku dayi kartaa Mixlr iyo SoundCloud.
Kani waa hab fiican oo lacag looga sameeyo internetka adoo adeegsanaya alaabada google.
Kasbashada waxay noqon kartaa qaab xayeysiis iyo kafaalaqaad.
War wanaagsan, waxaan haynaa maqaal ku saabsan Sida lacag looga helo Podcast -ka 2022 | Tilmaan Talaabo Talaabo ah.
# 4 Daraasado ku saabsan Abaalmarinta Fikradda Google
Ma waxaad tahay qof fikrad ka qaba macno ahaan wax walba? Markaas Ra'yi Abaalmarinta Google waa uun adiga kugu habboon.
Iyada oo leh abaalmarinta ra'yiga google, waxaad ka qayb qaadan kartaa sahan onlayn ah oo lacag -bixin ah kaas oo daboolaya mawduucyo kala duwan. Way dhakhso badan yihiin, waa sahlan yihiin waxaadna ka qayb qaadan kartaa sahanno badan.
Lacag -bixinta ayaa laga yaabaa inay tahay tan ugu yar liiskan, laakiin waa hab wanaagsan oo lacag looga sameeyo internetka iyadoo la adeegsanayo alaabada google.
# 5 Abuur App
Mareykanka, in ka badan 81% dadka waaweyn leedahay taleefan casri ah. Iyo taleefannada casriga ah waxaa ka buuxa barnaamijyo. Tani waxay ku tusaysaa in suuqaagu uusan noqon karin mid ciriiri badan. Qof walba qol buu leeyahay.
Marka, ka fikir barnaamij weyn oo casri ah oo qof walba xiisayn doono, horumarin doono, kuna iibin doono Dukaanka ciyaarta Google. Waa hab fiican oo lacag looga sameeyo internetka adoo adeegsanaya alaabada google.
Kaliya diyaar u noqo inaad fikirkaaga u rogto wax suuqa u baahdo. Abuur oo kor u qaad si wanaagsan, waxaa laga yaabaa inaad tahay milyaneerka xiga.
Waxaa jira habab badan oo lacag lagu helo adoo adeegsanaya Google Play Store: 11 Siyaabaha Aan Laheyn Si Aad Lacag Ugahesho google play store in
# 6 Qor oo iibi eBook
Miyaadan ku arag buugaagta ebook ee qoraaga aad ugu jeceshahay dukaanka Google play? Waxay lacag ka helayaan khadka tooska ah.
Tani waxay meesha ka saareysaa caqabadaha raadinta daabacayaasha si ay ula shaqeeyaan. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay waa inaad ogaato sida buuggaaga halkaas loogu soo saaro si dadku u arkaan. Waad ku mahadsan tahay warbaahinta bulshada iyo xayeysiisyada, taasi waa wax fudud. Kaliya ku rushay taabashada nuqul qorista oo ebook -gaagu wuxuu u fiican yahay iibiyaha ugu fiican.
U adeegso hal-abuurkaaga si aad ugu gudubto meesha ugu sarreysa liiska ee Google Play Store, waxaad kasban kartaa jeeg fiican.
#7 Xirfadaha Google
Google waxay kireysaa shaqaale leh awood kala duwan. Shaqaalaha fog iyo kuwa iskood u shaqeysta labadaba waa loo baahan yahay. Tani waa hab fiican oo lacag looga helo khadka tooska ah ee google.
Meesha ugu fiican ee laga raadiyo a Shaqada Google wuxuu saaran yahay guddigooda shaqada. Si xor ah u fiiri.
# 8 Qiimeeyaha Mashiinka Raadinta
Sida qiimeeyaha mashiinka raadinta, shaqadaada ayaa asal ahaan ah inaad hubiso in makiinadaha raadinta sida Google ay qabanayaan shaqadooda si ay u helaan macluumaadka ugu habboon ee adeegsadayaasha markasta.
Si kooban, waxaad ku cabbiri doontaa waxtarka bogagga internetka oo aad falanqeyn doontaa natiijooyinka mashiinka raadinta ee ka soo horjeedka raadinta.
Tag boggaga sida Boodbood iyo Lifaaqa si ay u tababaraan sida qiimeeyayaasha mashiinka raadinta, waxay kaloo shaqaaleeyaan.
Marabtaa in lacag lagaa siiyo si aad khadka tooska ah wax uga raadiso? Noqo qiimeeyaha mashiinka raadinta oo ka shaqee guriga.
#9 Cabirka Dhageystayaasha Google
Qiyaasta Dhegeystayaasha Google wuxuu leeyahay qaab isku mid ah oo leh aragtida google maadaama aad sidoo kale lacag ka hesho khadka tooska ah ee sheygan google.
Kooxaha Maareynta Dhageystayaasha ayaa kaa baraya adiga oo si fudud u codsanaya inay kugula socdaan isticmaalka qalabkaaga moobaylka, ka baaraan internetka, oo daawato TV-ga. Waxay tan u sameeyaan daraasado cilmi -baaris waxayna weydiisanayaan ka -qaybgalayaasha inay qayb ka noqdaan daraasadda.
Waxaad qiyaasi doontaa qalabka u qalma si marka aad qalabkaaga u isticmaasho mitirka rakibmay, xogtaada si ammaan ah loola wadaago Google. Macluumaadka qaarkood ee la soo ururiyey waa buskudka, bogagga, iyo barnaamijyada aad isticmaasho, iyo waxa muujiya inay ka ciyaarayaan telefishankaaga.
Sideen ku Helaa Google Adsense?
Waxaa jira 3 talaabo oo fudud oo lagu bilaabi karo lacag u helida bartaada internetka adoo adeegsanaya google.
Marka hore, samee koonto google ah.
Haddii aad isticmaaleyso Gmail ama adeeg kale oo Google ah, waxaad horey u leedahay mid. Haddii kale, hal abuur, waxay kugu gelin doontaa AdSense iyo wax kasta oo Google ah.
Marka labaad, waxaad u baahan tahay lambar taleefan iyo cinwaan boosto
Isticmaal lambarka taleefanka iyo cinwaanka boostada ee koontadaada bangiga si aad u hesho dakhliga.
Seddexaad, ku xir websaydhkaaga Adsense
Kudar hal nambar koodhka bartaada oo Google ayaa daryeeli doonta inta hartay, taas oo kuu oggolaanaysa inaad kobciso ganacsigaaga.
Ka hadalka koodhadhka Adsense, halkan waxaa ku yaal sida loo adeegsado lambarka xayeysiinta otomaatiga ah.
Gal koontadaada AdSense.
Guji Guudmarka Xayeysiiska.
Guji Hel koodh.
Nuqul noodhka koodhka.
Waxaa jira tanno siyaabo ah oo lacag looga helo khadka tooska ah iyadoo la adeegsanayo alaabada google. Kaliya dooro oo safarka bilow.
Waxaan ku balan qaadi karnaa AdSense iyo qaddarka saxda ah ee qasabadaha waxaad ka sameyn doontaa lacag caddaan ah oo dheeraad ah google.
Sidoo kale, waxaa jira siyaabo kale oo lacag looga heli karo khadka tooska ah ee wax soo saarka google oo kala ah SEO consulting, Adwords, Google keyword planner, iyo Google Checkout.
Si kastaba ha ahaatee, kuwani si toos ah lacag kuuguma samayn doonaan, laakiin waxay kordhinayaan aragtidaada taas oo, iyaduna, abuuri doonta gujisyo badan iyo dakhli joogto ah.
Waxaan rajaynaynaa in maqaalkani ahaa mid wax tar ah, noo dhaaf faallooyinka hoose.
11 Siyaabaha Aan Laheyn Si Aad Lacag Ugahesho google play store in
10 Siyaabood oo lacag looga helo barta Instagram 2022 | Tabaha la caddeeyay
Sidee Bloggers -ka Lacag uga Sameeyaan Fiidiyowyadooda | Khabiir …
Lacag Ma Ka Sameyn Kartaa Snapchat Sanadka 2022? Khabiir…